सनसिटीमा बस्ने बेनिशा भन्छिन्ः बरु नूनपानी खाएर बस्छु, बाहिर निस्किन्न ! «
सनसिटीमा बस्ने बेनिशा भन्छिन्ः बरु नूनपानी खाएर बस्छु, बाहिर निस्किन्न !
Published : 14 April, 2020 10:03 pm
बेनिशा भन्छिन्, ‘यहाँ त अहिले कोही बाहिर निस्किनु भएको छैन । तल प्रहरीहरु बस्नुभएको छ । अरु बाहिर कोही देखिएका छैनन् ।’ बेनिशा पहिला–पहिला छतमा उक्लेर व्यायाम गर्ने गर्थिन् । अहिले त त्यो बन्द गरिएको छ । पहिला भन्दा अब झनै सतर्क हुनुपर्ने समय आएको बेनिशा बताउँछिन् । अब कोठाबाट बाहिरै ननिस्किने उनको योजना छ । केही समयका लागि पुग्ने खाद्यान्न भएकाले बाहिर ननिस्की नहुने पनि केही छैन ।
उनी भन्छिन्, ‘हामीले हिजो नै खाद्यान्नका सामानहरु ल्याएका छौँ । केही समयको लागि हामीलाई समस्या छैन । तर, खाना सकियो नै भने पनि तातोपानीमा नुन हालेर खाएर बस्छु, बाहिर जान्न ।’ बेनिशालाई त्यहाँ रहेका अन्य परिवारको चिन्ता छ । ‘मैले यहाँको व्यवस्थापनसँग उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिबारे कुरा गरेको थिएँ,’ बेनिशा भन्छिन्, ‘सरकारले नै सिल गरेको हो, अब सरकारबाट नै केही गर्नुहुन्छ होला भन्नुभएको छ ।’